OS X မှ standard account တစ်ခုကို standard account တစ်ခုအဖြစ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲ ငါက Mac ပါ
OS X ရှိ standard account တစ်ခုအား standard account တစ်ခုကိုမည်သို့ပြောင်းလဲရမည်နည်း
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ကိုသာသုံးပါက၊ အလုပ်နှင့်မိသားစုဘဝအတွက်မက်ကိုသုံးခြင်းမဟုတ်ဘဲ၎င်းအကြောင်းအရာများကိုရောထွေးရန်မလိုပါကအကောင့်တစ်ခုထက် ပို၍ ရှိခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်မရှိပါ။ သို့သော်အိမ်တွင် Mac ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သောသုံးစွဲသူများစွာရှိလျှင်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည် အကြောင်းအရာအားလုံးကိုဖွဲ့စည်းထားခြင်းကသုံးစွဲသူအကောင့်ကိုဖန်တီးနေသည် အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီကသူတို့ရဲ့ content တွေကိုသီးခြားစီရှိနိုင်အောင်လွတ်လပ်သော။ ပုံမှန်အသုံးပြုသူများသည် administrator စကားဝှက်မပါပဲ application များကိုတပ်ဆင်။ မရပါကပြောင်းလဲမှုများကိုပြုလုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရီးကိုသွားမည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစုဝင်များကိုစီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ်ထားခဲ့လိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏စကားဝှက်ကို (အကြံပြုထားခြင်းမရှိ) သို့မဟုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။ သင်၏ standard account ကို administrator account သို့ပြောင်းပါ, အမှု၌, ငါတို့ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်သောရသောနေ့ရက်ကာလ၌မည်သည့်အသုံးပြုသူပြaနာတစ်ခုရှိပါက။ Standard account တစ်ခုကို Administrator account တစ်ခုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲနိုင်ရန် terminal သို့မဟုတ်မှတဆင့် System Preferences အတွင်းရှိအသုံးပြုသူများနှင့်အုပ်စုဖွဲ့ညှိနှိုင်းမှုမီနူးများမှနည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိသည်။
1 OS X ရှိ standard account ကို administrator account သို့ပြောင်းပါ
1.1 နည်းလမ်း ၁ - System Preferences မှတဆင့်
2 နည်းလမ်း ၂ - Terminal မှတစ်ဆင့်
OS X ရှိ standard account ကို administrator account သို့ပြောင်းပါ
နည်းလမ်း ၁ - System Preferences မှတဆင့်
ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့တက်သည် System ကို ဦး စားပေး။ ကိုနှိပ်ပါ အသုံးပြုသူများနှင့်အုပ်စုများ.
ထို့နောက် Mac ကိုသုံးသောအသုံးပြုသူများအားလုံးတည်ရှိပြီးဘယ်ဘက်ကော်လံသို့သွားပြီးအပေါ်ကိုနှိပ်ပါ ကျနော်တို့ administrator သို့လှည့်ချင်သောအကောင့်.
ထို ၀ င်းဒိုး၏ညာဘက်အခြမ်းတွင်အမည်ပါသော box တစ်ခုသည်အောက်ခြေတွင်ပေါ်လာလိမ့်မည် အသုံးပြုသူကိုဤကွန်ပျူတာကိုစီမံခွင့်ပြုသည်။ အသုံးပြုသူကိုစီမံခန့်ခွဲသူဖြစ်စေရန်ဤအကွက်ကိုကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးရမည်။
လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက် Mac ကို restart လုပ်ရမယ် ပြောင်းလဲမှုများကိုမှန်ကန်စွာအရပျကိုယူဘို့။
နည်းလမ်း ၂ - Terminal မှတစ်ဆင့်
Terminal application ကိုဖွင့်ပြီးတာနဲ့အောက်ပါ command ကိုရေးပါလိမ့်မည်။ -append / groups / admin GroupMembership USERNAME ဘယ်မှာလဲ USERNAME သည်သုံးစွဲသူအကောင့်အမည်ဖြစ်သည် ကျနော်တို့ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးလုပ်ချင်တယ်။
ထို့နောက် OS X ကလက်ရှိအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏စကားဝှက်ကိုတောင်းလိမ့်မည် system ကို restart လုပ်ပါ ပြောင်းလဲမှုများကိုမှန်ကန်စွာအရပျကိုယူဘို့။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » OS X ရှိ standard account တစ်ခုအား standard account တစ်ခုကိုမည်သို့ပြောင်းလဲရမည်နည်း
Pixar နှင့် Jobs အကြောင်းစာအုပ်အသစ်။ Pixar နှင့် Beyond to - ဖျော်ဖြေရေးသမိုင်းအတွက်စတိဗ်ဂျော့ဘ်နှင့်ကျွန်ုပ်မမျှော်လင့်သောခရီး